Rinayy (@C_silla98)'s conversations - Wattpad
- အိုင့် fiction တွေက ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေချည်းပါပဲ (ဒါလေးပြောပြချင်လို့ပါ) relaxing ဖြစ်တဲ့အချိန်မှ ဖတ်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်နော်။ ဒီလို typeတွေကြိုက်လို့ဖတ်တာဆိုရင်တောင် အမြဲတန်းတော့ ဖတ်နေနိုင်မယ်မထင်လို့ပါ။ 'ပျင်းစရာကြီး' ဆိုပြီးတော့ တွေးမိမှာ‌ပဲလေ </3
အဲ့တော့ 'ပျင်းစရာကောင်းတာတွေ ဘာလို့ရေးတာလဲ' ဆိုရင်တော့ အိုင်ဖတ်ချင်လို့ပါ (စိတ်တိုင်းကျတဲ့ fiction တွေနည်းတာမလို့ ကိုယ်တိုင် ပြန်ရေးယုံပါပဲ) မကြိုက်ရင် ဒီတိုင်းမဖတ်ပဲ ပြန်လှည့်သွားပေးပါနော် (အချိန်ပေးပြီး ပြောပေးစရာကို မလိုပါဘူး)
( ဒါကလဲ bad compliment ရလို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုကထဲက ပျင်းစရာfictions တွေပဲရေးမှာဆိုတာကို ပြောပြထားတာပါ )
@C_silla98 ဒီတိုက်တွေပဲကြိုက်ပေမယ့် သိပ်ရှာမတွေ့ဘူးရယ် ‌
@C_silla98 မီကတော့ ဗြောရဲ့ fictionတွေကို ပျင်းစရာရယ်လို့မမြင်ပါဘူး soft ဘက်ပိုရောက်တယ်လို့ထင်တယ်၊ တကယ်လဲ ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖတ်ချင်နေတာ ( မိုးတွင်းမှာ coffeeတစ်ခွက်နဲ့ အေးဆေးထိုင်ဖတ်လို့ရမယ့် ဟာမျိုးပေါ့ ) အခုတော့ မီးပျက်နေပေမယ့် *
miss you so much babeee  ᗒ.ᗕ
writing style လေးက aesthetic တကယ်ဖြစ်တယ် BOမွာပါတဲ့ recommented song လေးတွေလဲ တကယ်ကြိုက်တယ်
@ichika_ackerman tysm for this review !!
တခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုပဲ ထည့်တွက်ပြီး ပြန်မပေါ်လာတော့ဘူးလား?? ‌ဗြောရယ် လူတွေကအများကြီးပါ နင်နဲ့အတွေးတူတဲ့သူလဲ ရှိချင်ရင် ရှိမယ် ရှိချင်မှလဲရှိမယ်၊ အဲ့ဒါတွေကို ဂရုစိုက်မနေနဲ့ only mind your business!
@RinaHyeonie နင်ရေးထားတာ နိုတီလဲ မတက်ဘူး  </3
@RinaHyeonie ငါ့မှာတော့ မနည်းစာစီပြီး တရားလာချတာ သူက အက်‌ဒိတ်ဖို့ ကြိုရေးနေတာတဲ့ :')
ဗြောမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ နှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတယ် 'ခေါင်းခရမ်းနဲ့ ခေါင်းဝါ ဆူပရီမာစီ'ဆိုလို့ xd
@_AnnaMia97 မင်ဟိုလှတာကို အခုမှသိသလား xd
@_AnnaMia97 btw ပရိုဖိုင်ထဲက ရီနိုးလေးလှ
Why did you unpublish Sunflower? ㄱㅅㄱ I need your medicine Babiiii !!!
@C_silla98 MATE!!!! WHY DID YOU DO THIS TO ME  Come on :((
@hooniehours did smth happen to you?? if it's about my chanlix fiction I already delete it. TwT
ur writing skills are getting better and better each day!
@lixlrmh ahh not that much but thank you so much !! <3
Hyunnie ရဲ့ vliveလေးထဲမှာ minhoပုံကိုဆွဲပေးသွားတာ တွေ့ပြီးပြီလား ဗြောရေ !!
@JeniLS12 တွေ့ပြီးပါပြီ lil details တွေကအစသေချာဆွဲပေးထားတာ proud to haveatalent boy like this TT
update ပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျာ စ​ငေ့်နေရတာ Brown Ocean ကို
@RINASELLE စောင့်နေပေးတာနဲ့တင် အိုင်ကလဲ ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ^^♡︎
My beloved kiddo where r u:')
@Akiyoshini, in Hwang Hyunjin's heart °>°